Madasha Xisbiyada Qaranka oo war culus kasoo saartay wasiirada dowladda
August 2, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 0
MUQDISHO(P-TIMES)- Madasha Xisbiyada Qaran oo ay ku midaysan yihiin Lix xisbi siyaasadeed oo ay hoggaan u yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ee Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay kasoo horjeesteen talaabooyinkii ugu dambeeyay ee ay qaadeen gollaha wasiirada Soomaaliya ee xilka sii haya.
War saxaafadeed kasoo baxay Madasha Xisbiyada Qaran ayaa waxaa loogu baaqay madaxda sare ee dalka iyo gollaha wasiirada xilka sii haya inay ilaaliyaan sharciga iyo dastuurka xiligan lagu guda jiro kala guurka oo hadaan la garowsan uu dalka gali karo khalalaaso siyaasadeed.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa waxa ay soo dhoweeyeen gudiyada farsamo ee dhamaystirka natiijada shirkii Dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxda dowladda iyo dowlaadd goboleedyada si go’aan looga gaaro arimaha doorashooyinka dalka.
War saxaafadeed kasoo baxay Madasha Xisbiyada Qaran oo ka kooban 7 Qodob ayaa waxaa sidoo ale lagu sheegay in xukuumadda sida KMG ah xilka u sii haysa aysan awood u laheyn gaarista go’aamo masiiri ah oo ay ku meel mari garto guddiyo dastuuri ah oo horay looga gaabiyay.
Waxaa sidoo kale ay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin talaabooyinkii gollaha wasiirada xilka sii haya ay ku magacaabeen 30/7/2020 xubnaha gollaha adeega Garsoorka iyo Batroolka Soomaaliya, kuwaas oo ay sheegeen inay ahaayeen habka loo maray shari darro.
Ugu dambayn Madasha Xisbiyada Qaran waxa ay ugu baaqeen xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya inay si dhow ula socdaan talaabo kasta oo ay qaadayaan gollaha wasiirada xilka sii haya isla markaasna ay ula xisaabtamaan si joogta ah ilaa iyo inta laga soo magacaabayo Ra’iisul wasaare cusub.